I-Pantone Studio ikunceda ekubambeni imibala ngekhamera yakho ephathekayo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-Pantone yaziwa kakuhle phawula imibala yexesha lonyaka kunye noluhlu lwemibala ekulula ngayo ukubona iphalethi. Luphawu olwamkelweyo kwaye ulapha amaxesha ambalwa ukuze athabathe ezinye zeendlela ezihambelana nemibala enje loo mibala ili-10 ka-2017.
Kwi-Android kunye ne-iOS siye safumana uthotho lweeapps ukuze sikwazi bamba ithoni ngqo umbala wokuwusebenzisa kamva ekusebenzeni kwewebhu okanye ezinye iintlobo zoyilo. Kodwa into esisilelayo yayilusetyenziso olusemthethweni lwePantone ngesi sizathu. Kungenxa yoko le nto kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, usetyenziso olubizwa ngokuba yiPantone Studio lwasungulwa kwi-iOS.
Esi sicelo sinika isithembiso sokufaka zombini imibala yokwenyani xa ufotwa kunye nenkqubo yekhamera njengemibala enokuthi ivele kwimifanekiso esiyigcine kwifowuni.
Esinye isizathu sobukho bale app kukusebenza njengesikhokelo sedijithali sePantone, ngazo zonke ezo zikhombisi zombala kunye neenguqulelo zombala weRGB, umbala weCMYK kunye nombala wehexadecimal. URokkan ubeyigosa eliphetheyo yokudala esi sicelo. Ngaloo nto, iPantone iqinisekisa ukuba ifikelela kwinani elikhulu labasebenzisi abanendlela efanelekileyo yokufikelela kubalandeli babo, abalandeli okanye nakubathengi bexesha elizayo.
Ngokuya kwiwebhusayithi yeRokkan, namhlanje kukho ezinye 3,7 yezigidi zabaqulunqi bedijithali ngeenkqubo zokuyila ezisekwe kwilizwe lobuchwepheshe. Phakathi kwePantone kunye neRokkan baneenjongo zokuthwala zonke iimveliso zenkampani, nangona ewe, sisalinde ukuba zisetyenziswe kwi-Android, kuba le app ayiphoswanga.
Inguqulelo yokuqala yePantone Studio ine ujongano olunomtsalane nolunomdla oko kubandakanya umxholo kunye nezixhobo onokuthi uphefumlelwe ngazo ngezimvo ezintsha: Iintsingiselo zePantone, iiprofayili zabadali ababonakalayo abaphambili, umbala wonyaka, amathala eencwadi ongezelelweyo anemibala engaphezu kwe-10.000 XNUMX nokunye okuninzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Ukuthatha kunye nokuchonga imibala akukho nto ingcono kunePantone Studio